Izinto eziyi-15 zeWebhusayithi Esebenza Kakhulu » Martech Zone
Izinto eziyi-15 zeWebhusayithi Esebenza Kakhulu
NgoMsombuluko, Januwari 18, 2016 NgoLwesibili, Januwari 19, 2016 Douglas Karr
Ezinye izeluleko aziphelelwa yisikhathi, futhi ngikholwa ukuthi lolu hlu lokuhlola kusuka ku- I-Quickprout ungomunye wabo. Abakhangisi bavame ukuba matasa kakhulu ekukhiqizeni nasekuhlolweni kokuqukethwe kangangokuba bavame ukuphuthelwa yizinto eziyisisekelo ezidingekayo empumelelweni.
Lokhu kukhonjiswa kwe-infographic kuzinto eziyi-10 ezidingekayo ekuzibandakanyeni kwabafundi, ukwenza kahle izinjini, kanye nokwabelana nomphakathi
ukuqondana - cwaninga, bhala futhi uqambe okuqukethwe ukwazisa abasebenzisi ngokuphelele kunokuba uzame ukudlala ezinjini zokusesha.
Ubude bokuqukethwe - zinike isikhathi sokukhiqiza izindatshana ezinde, eziphelele ngesihloko kunokuba uqoqe ama-athikili amafushane.
Media - Sebenzisa izithombe nevidiyo kuzo zonke izindatshana ukuze ukhulume kangcono ngesihloko. Ngisho nokukhethwa kwesithombe esifanele kungakhulisa inkumbulo nokuqonda esihlokweni. Ama-infographics namavidiyo okuchaza anganikeza isisombululo esiphelele.
Uhlelo lolimi nesipelingi - Amagama angafanele, isipelingi namaphutha ohlelo angaphazamisa umbono wokuqala kuzivakashi. Ubhalisela i- Grammarly kuwufanele utshalomali!
Ukufunda - gwema ukukhuluma kwezokukhangisa nokuxhumana ngempumelelo. Okuqukethwe okudidekile noma okuyinkimbinkimbi kungakhipha amakhasimende amaningi angaba khona.
Ukufometha - Ukuhleleka kokuthunyelwe kwakho, ukusetshenziswa kwezithombe, ubhalo, ubumhlophe, ukugqama, ukugcizelela, amagama angukhiye nezihlokwana konke kuthuthukisa ikhono labafundi lokuskena nokugcina okuqukethwe kwakho.
ubuchwepheshe - Ukwakha ubukhona bakho ku-inthanethi negunya embonini yakho kubaluleke kakhulu ekwakheni ukwethembana ekugcineni okuhambisa abafundi kumakhasimende.
Amasheya social - Ukubalwa kuyinkomba yokuthandwa negunya, ngakho-ke ukusebenzisa izinkinobho zokwabelana komphakathi nokubonisa ukubalwa kokubukwa nokwabelana kungashayela ukwabelana okwengeziwe nokuguqulwa.
Links - Ukugwema izixhumanisi eziphumayo kukhawulela ikhono lakho lokunikeza izinkomba ngokunemba kokuqukethwe kwakho. Ukugwema izixhumanisi zangaphakathi kukhawulela ikhono lomfundi wakho lokujula ngokujulile esihlokweni. Kokubili kuyasebenza futhi kufanele uqinisekise ukuthi wonke amakhasi anazo.
Amazwana - Ngenkathi izingxoxo zithuthele kakhulu kumasayithi wokuxhumana nomphakathi, ikhwalithi yamazwana akho isabalulekile, njengesikhathi sakho sokuphendula kubo. Bandakanya nawo wonke amazwana amahle futhi ubike noma imuphi ugaxekile.
Izinto ezimbili ezingeziwe
Angiqiniseki ukuthi kungani kungenzeka ukuthi bashiywe ngaphandle, kepha ngicabanga ukuthi kunezinto ezinhlanu ezingeziwe, ezibucayi kakhulu ezingekho kulolu hlu!
Okubhaliselwe - Ukunikeza izivakashi izindlela zokubhalisela i-imeyili, incwadi yezindaba noma izaziso zesiphequluli nje kungakunika izindlela zokondla izivakashi futhi uzigcine zibuya.
Ukubizelwa Esenzweni - Ufuna ukuthi izivakashi zenzeni kusayithi lakho? Ukunikela nokuhlola izinhlobo ezahlukahlukene zokubizelwa esenzweni kubalulekile ukushiya umzila wezivakashi ukuthi uzibandakanye nomkhiqizo wakho noma uthenge imikhiqizo noma izinsizakalo zakho.
Contact - Ikhono lezivakashi lokushaya, ukuxoxa, noma ngisho nokushiya umlayezo liyadingeka. Okungcono kakhulu amamephu nezikhombisi-ndlela, izinkinobho zokuchofoza ukuze ushayele, nezixazululo zengxoxo ezigadiwe.
Ukucinga - Izikhathi eziningi, izivakashi zifika kusayithi lakho kepha zingakutholi lokho ezikufunayo ngempela. Ukuhlinzeka ngendlela yosesho lwangaphakathi olusebenzayo kungabavimba ekushayeni.
Isabele - Ingabe isiza sakho senzelwe ubuningi bamadivayisi nobukhulu bokubuka emakethe? Iwebhusayithi ephendulayo iyadingeka kulezi zinsuku, futhi ingathinta amazinga akho okusesha weselula.
Tags: Igunyaubiza isenzoimibonoamakhasi wokuxhumanaubude bokuqukethweUkukhangisa OkuqukethweIzakhiizixhumanisi zangaphandleizixhumanisi zangaphakathiusesho lwangaphakathiubude bokuqukethweiphephandabaukufometha kwekhasiikhwalithi yewebhusayithiquicksproutukuhambisanaamawebhusayithi aphendulayookubhaliselweukunyathelisaizakhi zekhasi lewebhuiwebhusayithi
Ubani Ophethe i-Teleprospecting?